Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || जीवनसँग पिपिरीको साइनो – kayakairan.com
जीवनसँग पिपिरीको साइनो
सहजकर्ता विजय विश्वकर्मा कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गरिसकेका थिए । तर, डा. केशवराज चालिसेले ‘एकैछिन’ भनी रोके । अघिल्तिर रहेको किताबको बीचमा च्यापेर ल्याएको २ वटा हरियो पात झिके । अघिल्तिर रहेका मीनराज बसन्ततिर सारे । अनि भने, “पिपिरी’का लेखकलाई खासमा पिपरी बजाउनचाहिं आउँछ कि आउन्न त ?”
मीनराजले पनि चुनौती स्वीकारे । हरियो पात हातमा लिए । बेरे । मुखमा हाले । फुके । बजेन । “पिपरी हाम्रो गाउँघरको बाजा हो”, उनले भने, “तर, यो सजिलै बज्दैन र अरु बाजाजस्तो लय मिलाएर बजाउन पनि सकिदैन ।” उनले मान्छेको जीवनलाई पनि यही पिपिरीसँग तुलना गरे । “मान्छेको जीवन पनि पिपिरी नै हो”, उनले भने, “जिउन खोजेजस्तो नहुन पनि सक्छ ।”
पिपिरी बसन्तको दोस्रो उपन्यास कृति हो । ३ सालअघि ‘मुदिर’ ल्याउँदा उनले राम्रै चर्चा पाएका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा आम नेपाली युवाले भोगेका कहरलाई उनले यथार्थपरक ढंगले प्रस्तुत गरेका थिए । “यो पनि यथार्थपरक नै छ”, टिप्पणीकार उदय अधिकारीले भने, “तर, पहिलो कृतिमा त्यति गम्भीर विषय उठाएका लेखकले दोस्रोमा किन सहज विषय रोजे ?” यही विषयलाई सहजकर्ता विश्वकर्माले पनि जोड दिएपछि मीनराज बोल्न बाध्य भए, “मलाई मेरै गाउँ प्यारो लागेको हो, मेरै बाल्यकाल प्यारो लागेको हो, मैले बाँचेको परिवेश नै प्यारो लाग्ेको हो ।”
संवादकै क्रममा अधिकारीले पिपिरीमा पनि लेखकीय उत्तरदायित्वबाट भने वञ्चित नभएको दावी गरे । “अब तेस्रो कृति अझै गम्भीर आउने अपेक्षा छ”, उनले भने, “लेखक एकपछि अर्को कृतिमा झनै तिखारिदैं जानुपर्छ ।”
मीनराज बाग्लुङे लेखक हुन् । पिपिरीमा उनले त्यही क्षेत्रमा बोलिने लवज टपक्कै टिपेर पिपिरीमा उनेका छन् । “एक हिसाबले मेरो ठाउँको भाषा ‘प्रमोसन’ गर्ने स्वार्थ पनि छ”, उनले थपे, “खासमा मेरो बाल्यकालको लोभ नै हो ।” मुदिर पनि उनले खाडी मुलुकमा भोगेको दुःखसँग निकै नजिक थियो ।
संवादका क्रममा विजयले अर्का टिप्पणीकार लक्ष्मी बराललाई सोधे, “पहिलो कृतिमा चलेका लेखक दोस्रो कृतिमा ‘आत्महत्या’ गर्छन् वा विचलिन हुन्छन् भनिन्छ, पिपिरीमा योे लागू हुन्छ कि हुन्न ?” जवाफमा बरालले भनिन्, “मीनराजको लेखनमा थप सुधार देखिएको पाएँ । पिपिरीमा संवेदनाको तह अझै गहिरिएको छ ।” मुदिरको तुलनामा पिपिरीबाट पाठकले आख्यानको अग्र्यानिक स्वाद पाउने उनले दावी गरिन् । टिप्पणीकार डा. चालिसेले मीनराजको किताबमा वर्गीय द्वन्द्व र विद्रोह छताछुल्ल भएको बताए । उनले किताबको तीन विशेषता रहेको बताए । “आख्यानात्मकता, चित्रणात्मकता र वर्णनात्मकता उनको किताबका विशेषता हुन्”, उनले भने, “कहिंकतै कमजोरी रहेपनि यी हिसाबले कृति बलियो छ ।”
पिपिरीमा मीनराजले एकजना विधवा महिलाको संघर्ष उतारेका छन् । जवरजस्ती बालविवाह, एकल भएपछि समाजबाट पाएको पीडा, संघर्ष र पारिवारिक सुखबाट वञ्चित हुनुपरेको परिवेश यहाँ देखाइएको छ । साथै, देवेन्द्रका रुपमा प्रमुख पात्रले भोगेका दुःख र संघर्षको फेहरिस्त पनि कृतिमा छ । “यति पढिसक्दा खासमा पिपिरी कथाकी आमाले बजाएकी हुन् कि तपाईं(देवेन्द्र)ले ?”, दर्शक दीर्घामा रहेका डा.एकनारायण पौडेलले जिज्ञासा राखे । “पिपिरी त मैले नै बजाएको हो”, लेखकले भने, “तर, आमाको पिपिरी र देवेन्द्रको पिपिरीबीच तुलना गरिएको छ ।”
पाठकका तर्फबाट प्रकाश चापागाईंले पनि जिज्ञासा राखेका थिए । अर्का पाठक प्रेम सिग्देलले किताबमा रहेको सवल र दुर्वल पक्ष समेटेर हस्तलिखित प्रश्न तथा सुझाव लेखकलाई दिए ।
सम्पूर्ण किताब नारायणगढले आयोजना गरेको कार्यक्रम चितवन साहित्य परिषद्को सभाहलमा गरिएको थियो । फिनिक्स बुक्स काठमाडौंले प्रकाशन गरेको पिपिरीमा ३५६ पेज छन् । यसको बिक्री मूल्य ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
बाग्लुङ स्थायी घर भएपनि लेखक मीनराज चितवनमै बसोबास गर्छन् । उनको दुवै कृतिको चर्चा चितवनमा विशेष छ । यस क्षेत्रमा साहित्यिक किताब बिक्री वितरण गर्दै आएको सम्पूर्ण किताबका सञ्चालक लेखराम सापकोटाका अनुसार पछिल्लो समयमा बजारमा आएका कृतिहरुमध्ये राम्रो चर्चा पाउनेमा पिपिरी पर्छ । “बजार राम्रो छ”, उनले भने, “पाठकबाट खोजी भइरहेको पाएका छौं ।”